Xaalada dilalka Malmö oo faraha ka sii baxaysa | Somaliska
Magaalada Malmö ayaa mugdi sii galeysa ka dib markii dilal isdaba joog ah ay ka socdeen bilihii la soo dhaafay. Hal bil gudaheed ayaa waxaa lagu dilay magaalada 5 qof oo kii ugu dambeeyay uu ahaa nin 40 jir ah oo shalay wada cad lagu dilay.
Isbuucii la soo dhaafay ayaa sidoo kale lagu dilay wiil 15 sano jir ah oo madaxa laga toogtay. Booliska ayaa arintaan ku eedeynaya in magaalada ay ku soo siyaaday ka ganacsiga hubka sharci darada ah kuwaasoo gacanta u galay gaangiistarada ka jira magaalada.
Sababta lagu dilay wiilka 15 sano jirka ah ayaan ilaa hada cadeyn iyadoo la sheegay in uu ka mid ahaa caruurta caadiga ah oo uusan wax dhibaato ah geysan. Ninka shalay lagu dilay ayaa sidoo kale boolisku sheegeen in uusan diiwaanka jirin.
Booliska ayaa hada walwal ka muujiyay xaalada iyaga oo caawimaad ka dalbaday booliska qaranka isla markaana sheegay in ay siyaadinayaan baaritaanada magaalada.
Bilowgii hore waxay u badnaayeen dadka gaangiistarada waxa isdilayay balse hada ayaa muuqata xitaa shacabku in ay bartilmaameedyihiin.
Guud ahaan magaalada Malmö oo ay aad ugu badanyihiin soo galootiga ayaa lagu yaqaan meel amaan daro ay ka jirto iyo qalalaase kale. Sanadkii 2010 ayay ahayd markii nin cunsuri ah uu dad badan oo soo galooti ah ugaarsi ku dilay.
asc walao ad bad u mahadsantahay jimcale waxan ku su,aala ma somali miya ku jirtaba waxa hada dhibka lo gestay
Inshallah khayr, ilaahy uun ba la isku xidha.Aduunkan wa iska labo cisho..ilaahyo khaatumada ha na seejin uun.
sc sax samsam run ku hadashay walaahi ilaahay ha ina ilaaliyo walaal
faaduumo xamda says:
January 9, 2012 at 00:18
asc walaayaal ilahaay ha inaa ilaaliyo kuligeenba ilahaayna
ha laaysku xidhoo meelkaasta ood joogtaan ilahay ha laga baqo
walalayal marka hore asc adunkan lamajogayo qof walbo gere aya soqaysa walalayal meelkaasta ad joogtaan ilahay hana ilaliyo